လူ့ဘဝ၏ အနှစ်သာရ တန်ဖိုး ~ အလွမ်းခရီးသည်
ပါဠိ ၏ အနက်အဓိပ္ပါယ်များ
Android root လုပ်နည်းများး
Android root tool apk
Android မြန်မာဖောင့်ထည့် နည်းများ
Android မြန်မာဖောင့်မျိုးစုံ နှင်ကီးဘုတ်မျိုးစုံ
လူ့ဘဝ၏ အနှစ်သာရ တန်ဖိုး
Monday, February 25, 2013 ဆောင်းပါး No comments
လူ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ကြားဖူးနေကြ “ တန်ဖိုးရှိအောင်နေ ” ၊ “တန်ဖိုးမဲ့တဲ့ အလုပ်တွေ မလုပ်ကြနဲ့” စသည်ဖြစ် ကြားကြားနေရတော့ တန်ဖိုးဆိုတာ ဘာလဲလို့ တွေးကြည့်မိသည်။
တန်ဖိုး... အထူးသဖြစ် လူတစ်ယောက်ရဲ့ တန်ဖိုးကို မည်သည့်အရာများနှင့် တိုင်းတာကြပါသနည်း။
ငွေကြေးနှင့် တိုင်းတာကြသည်လား ၊ ပညာဖြစ် တိုင်းတာကြသည်လား ။ အသိုင်းအဝိုင်းကိုကြည့်၍ တန်ဖိုးနိမ့်သည်၊ မြင့်သည် စံထားတိုင်းတာကြသည်လား..။ ဤသို့ဆိုလျှင် ငွေကြေးချမ်းသာကြသောသူတိုင်းက တန်ဖိုးရှိကြပေတော့မည် ။ ပညာတတ်သူတိုင်းက တန်ဖိုးရှိကြတော့မည်။ အသိုင်းအဝိုင်းကြီးသူတိုင်းက တန်ဖိုးရှိသည့် လူသားများအဖြစ် ရှင်သန်သွားကြရတော့မည်ပေါ့။
ဟိုတစ်ယောက်က ပညာသာရှိတာ ၊ ပြောလိုက်တဲ့ စကားတွေက တန်ဖိုးမရှိတဲ့ စကားတွေ ၊ ဒီတစ်ယောက်ကဖြစ် ငွေကြေးချမ်းသာပြီး အပြုအမူတွေက တန်ဖိုးမဲ့တယ်။ သူက အသိုင်းအဝိုင်းသာ ကြီးတာ ဘာမှ တန်ဖိုးရှိတဲ့သူ မဟုတ်ဘူး...စသည့် စကားလုံးများကို ကြားဖူးကြလိမ့်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
ဤသို့ဆိုလျှင် ဥစ္စာ ငွေကြေး ၊ ပညာကြွယ်ကာ အသိုင်းအဝိုင်း ကြီးမားပြည့်စုံသူတိုင်း တန်ဖိုးရှိသူတွေ မဟုတ်နိုင်တာ သေချာလောက်ပြီဟု စာဖတ်သူများ သိနားလည်နိုင်လောက်ပါပြီ။
လူတစ်ယောက်အတွက် တန်ဖိုးအရှိဆုံး အဓိကအချက်သည် မည်သည့်အရာလဲဟု မေးလျှင် သင်မည်သို့ ဖြေဆိုမည်လဲ။ သင့်အတွက် တန်ဖိုးအရှိဆုံးအရာသည် မည်သည့်အရာဖြစ်သနည်း။
လူ့တန်ဖိုးနှင့် စပ်လျင်း၍ မှတ်သားခဲ့ဖူးသော အကြောင်းအရာများထဲမှ သောနဒဏ္ဍတဇာတ်တော်အကြောင်းကို သတိတရ ရေးသားဖော်ပြလိုက်ရပါတယ်။ ဤအကြောင်းအရာကို စာပေကျမ်းဂန်များမှ အလွတ်ကူးယူခြင်းမဟုတ်ပဲ ဖတ်မှတ်ဖူးခဲ့သည်ကို ပြန်လည်ရေးသားခဲ့ခြင်းကြောင့် ဇာတ်လမ်းမှာ အနည်းငယ်လစ်ဟာမှုရှိလျှင် စာရေးသူ၏ အားနည်းချက်သာဖြစ်ကြောင်း ကြိုတင်ဝန်ချတောင်းပန်ပါသည်ရှင်။
ဗိမ္ဗိသာရမင်းကြီးလက်ထက်၌ စံပါမြို့ဆိုသည့် မြိုနယ်လေးတစ်ခု ရှိခဲ့ပါသည်။ ထိုစံပါမြို့ကလေးအား အုပ်ချုပ်သည့် သူမှာ သောနဒဏ္ဍတပုဏ္ဏားဖြစ်ပြီး နေထိုင်ကြသည့် သူများမှာ ဗြဟ္မာဏလူမျိုးများဖြစ်ကြလေသည်။
တစ်နေ့သောအခါဝယ် မြတ်စွာဘုရားရှင်သည် နောက်လိုက်၊ နောက်ပါရဟန်းများနှင့်အတူ ထိုစံပါမြို့လေးသို့ ကြွချီလာခဲ့ရာ ဘာသာရေး လွန်စွာ ကိုးကွယ်ယုံကြည်ကြသော စံပါမြို့သူမြို့သားများမှာ မြတ်စွာဘုရားရှင်အား သွားရောက်ရှစ်ခိုးဦးတိုက်ကြလေသည်။
သောနဒဏ္ဍတပုဏ္ဏားကြီးနှင့်တကွ မြတ်စွာဘုရားရှင်အား လာရောက်ရှစ်ခိုးပူဇော်ကြသော မြှိုသူမြို့သားများအား တရားရေအေးတိုက်ကျွေးရန် မြတ်စွာဘုရားမှ ယနေ့ရောက်လာကြကုန်သော တရားနာပရိသတ်တို့အား မည်သည့်တရားဟောမည်ကို တွေးဆပြီးနောက် တရားနာကြွရောက်လာသူ ပရိတ်သတ်များအား မေးခွန်းမေး၍ တရားဟောမည်ဟု တွေးဆကာ ပထမဦးစွာ ရှေ့ဆုံးမှ နေရာယူကာ ဦးတင်နေသော ပုဏ္ဏားကြီးအား စ၍ မေးခွန်းမေးလိုက်လေသည်။
“အသင်ပုဏ္ဏားကြီးပုဏ္ဏားကြီးတို့၏ ဗြဟ္မာဏမျိုးရိုး ဘာကြောင့် အမျိုးမြင့်မြတ်ရပါသလဲ”
ပုဏ္ဏားကြီးမှာ မြတ်စွာဘုရား၏ ဤသို့သော မေးခွန်းကို အမေးခံရလျှင် လွန်စွာမှ ဂုဏ်ယူ ဝမ်းမြှောက်မိလေသည်။ မိမိတို့၏ ကြီးမြင့်လှသည့် မျိုးရိုးကို မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်တိုင်က စိတ်ဝင်စားသည်ပါလားဟု တွေးမိကာ ဝမ်းသာအားရ လျှင်မြန်စွာ လျှောက်ထားလေးသည်။
“အရှင်ဘုရား တပည့်တော်တို့မျိုးရိုး မြင့်မြတ်နေတာ အခြားကြောင့် မဟုတ်ပါဘုရား။ တပည့်တော်တို့မှာ စောင့်ထိန်းရမည့်အချက် (၅) ချက်ရှိနေပါတယ်ဘုရား။
“ဒကာကြီး ထိုအချက်(၅) ချက်မှာ အဘယ်သို့နည်း ”
ဟု မေးမြန်းလေရာ ထိုပုဏ္ဏားမှ အားရဝမ်းသာစွာဖြစ် မိမိတို့မျိုးရိုးဂုဏ်ကို ဖော်ကျူးပြလေသည်။
“အရှင်ဘုရား တပည့်တော်တို့ မျိုးရိုးသည် နံပါတ်
၁။ ဆွေခုနှစ်ဆက် ၊ မျိုးခုနှစ်ဆက် မျိုးရိုးသန့်ရပါမည်။
၂။ဗေဒင်၊ ကျမ်းဂန် ၊ မန္တာန် အာဂုံရရမည်။
၃။ ရုပ်ရည် ချောမောတင့်တယ်ရပါမည်။
၅။ မှား/မှန် ခွဲခြားနိုင်သော ပညာရှိရပါမည်။
ဟု လျှောက်လေသည်။ ထိုအခါ မြတ်စွာဘုရားရှင်ထံမှ မမျှော်လင့်သော မေးခွန်း တစ်ခု ထွက်လာခဲ့သည်။
“ဒကာကြီး အကယ်၍များ တစ်ယောက်ယောက်က ဒကာကြီးအား ထိုအချက် (၅) ချက်ထဲမှ တစ်ချက်ချက်ကို လျှော့ပါဆိုလျှင် မည်သည့် အချက်ကို သင် လျှော့ပါမည်လဲ။
“အရှင်ဘုရား အကယ်၍များ တစ်ယောက်ယောက်က ထိုအချက် (၅) ချက်ထဲမှ တစ်ချက်ချက် လျှော့ပါဆိုလျှင် တပည့်တော် သည် ရုပ်ရည်ချောမောတင့်တယ် လှပရပါမည် ဆိုသော အချက်ကို လျှော့ပါမည်ဘုရား”
အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော ရုပ်ဆိုး ၊ ရုပ်လှဆိုသည်မှ ဘဝအဆက်ဆက်မှ ပြုလုပ်ခဲ့ကြသည့် ကုသိုလ် ၊အကုသိုလ် အကျိုးဆက်ကြောင့်သာဖြစ်သည်။ ယခုလက်ရှိဘဝအတွက် တပည့်တော်တို့မတတ်နိုင်ပါ။ တပည့်တော်တို့၏ မျိုးရိုးဂုဏ်ကို တင်ချင်၍သာ ရုပ်ရည်ချောမောလှပရမည် ဆိုသော အချက်ကို ထည့်သွင်းထားခြင်းကြောင့် စောင့်ထိန်းရမည့် အချက်(၅)ချက်တွင် တစ်ချက်လျှော့ရမည်ဆိုပါက “ရုပ်ရည်ချောမောလှပရမည် ” ဆိုသော အချက်ကို လျှော့ပါမည်ဘုရား။
“ပုဏ္ဏားကြီး “ရုပ်ရည်ချောမောလှပရမည်”ကို လျှော့ပြီးလျှင် နောက်ထပ်တစ်ချက်ထပ်လျှော့ကြည့် ဆိုပါက အသင်မည်သည့်အရာကို လျှော့မည်နည်း”
ထိုအခါတွင်လဲ ပုဏ္ဏားကြီးမှာ ဆိုင်းငံ့ခြင်းမရှိစွာနှင့်
“အရှင်ဘုရား အချက် (၂)ချက်လျှော့ရမည်ဆိုလျှင် တပည့်တော်သည် “ ဗေဒင် ၊ ကျမ်းဂန်၊မန္တာန်များအလွတ်ရရမည်” ဆိုသည့် အချက်ကို လျှော့ချပါမည်ဘုရား။
တပည့်တော်တို့ မျိုးရိုးတွင် ကျမ်းဂန်၊မန္တာန်များကို ရှေးလာစဉ်ဆက် အလွတ်ရသည်ရှိသကဲ့သို မရှိသည့်အခါလည်း ရှိခဲ့ဖူးပေလိမ့်မည်။ ကျမ်းဂန်စာပေများသည် စာအုပ်စာပေများနှင့် အစဉ်ထိမ်းသိမ်းလာကာ လိုအပ်ပါ ပြန်လည်ရှာဖွေနိုင်၍ မျိုးရိုးမြင့်မြတ်ရန် လိုအပ်သည့် အချက်(၅)ချက်တွင် (၂)ချက်လျှော့ရမည်ဆိုပါက တပည့်တော်သည် ထိုအချက်ကို လျှော့ချပါမည်ဘုရား”
ပုဏ္ဏားကြီး၏ ထိုသို့အဖြေပြီးဆုံးလျှင် မြတ်စွာဘုရားရှင်ထံမှ
“ပုဏ္ဏားကြီး အကယ်၍များ (၃)ချက်လျှော့ပါ ဆိုပါလျှင် မည်သည့်အချက်ကို သင်လျှော့ပါမည်နည်း။”
အချက် (၃)ချက် လျှော့ရမည်ဆိုသော အချိန်တွင် ပုဏ္ဏားကြီးမှာ ပြန်ဖြေရန် အနည်းငယ်ခက်ခဲလာလေပြီး။ ရှေးဦးစွာ မေးခဲ့သော မေးခွန်း (၂)ခုကဲ့သို့ လွယ်လင့်စွာ ဖြေဆိုနိုင်ခြင်းမရှိတော့ပဲ သေချာတွေးဆကာ စဉ်းစားရပေလေသည်။ အချိန်အတော်ကြာ စဉ်းစားလေပြီးသော်အခါဝယ် ပုဏ္ဏားထံမှ
“အရှင်ဘုရား ..မလျှော့မဖြစ် လျှော့ရမည် ဆိုပါက တပည့်တော်သည် “ ဆွေခုနှစ်ဆက်၊မျိုးခုနှစ်ဆက် မျိုးသန့်ရမည်” ဆိုသော အချက်ကို လျှော့ရပါမည်ဘုရား”
ပုဏ္ဏားကြီး၏ ထိုသို့သော အဖြေပြီးဆုံးလျှင် မြတ်စွာဘုရားရှင်ထံမှ မည်သည့်အသံမျှ မထွက်ပေါ်သေးမှီ ပုဏ္ဏားကြီး၏ အမျိုးအနွယ်ဝင် မြို့သူမြို့သားများထံမှ
“အသင်ပုဏ္ဏားကြီး...အဘယ်ကြောင့်ထိုအချက်ကို လျှော့ရမည်နည်း။ အကျွန်နုပ်တို့ မျိုးရိုးကို အထိခိုက်မခံနိုင်ပါ။ မျိုးရိုးဆိုတာ အလွန်အရေးကြီးပါတယ်။ မျိုးရိုးသန့်ချင်၍ ထိုအချက်ကို ထည့်ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ပုဏ္ဏားကြီးအနေနှင့် လျှော့ချင်လျှော့ ကျန်သော အချက်နှစ်ချက်ထဲမှ ကြိုက်ရာကို လျှော့ပါ။ ဆွေခုနှစ်ဆက် မျိုးခုနှစ်ဆက်မျိုးရိုးသန့်ရမည်ဆိုသော အချက်ကို မလျှော့နိုင်ပါ”
ဟု ဆိုသည့် အသံများ ထွက်ပေါ်လာလေသည်။ ထိုသို့ ဆူညံ့လာသည့်အခါဝယ် ပုဏ္ဏားကြီးမှ မြတ်စွာဘုရားရှင်ထံ ခွင့်တောင်း၍ မတ်တပ်ရပ်ကာ သူ၏ မြို့သူမြို့သားများအား စကားစလေသည်။
“အသင်တို့ ငါဆိုသော စကားကို နားထောင်ကြည့်ပါ။ငါ၏ ဆိုစကား ဆုံးလေသော်မှ သင်တို့၏ မကျေနပ်ချက်များကို ပြောကြားကြပါ။ ငါသည် အဘယ်ကြောင့် ဆွေခုနှစ်ဆက် မျိုးခုနှစ်ဆက် မျိုးရိုးသန့်ရမည်ဟူသောအချက်ကို လျှော့ချရသည် ဆိုလျှင် ပထမဦးစွာ ငါချန်ထားသည့် အချက်နှစ်ချက်မှာ
ဤ နှစ်ချက်ကိုသာ ချန်ထားခဲ့ပါသည်။ အဘယ်ကြောင့် ထိုနှစ်ချက်ကို ချန်ထားခဲ့ရသနည်းဆိုသော် ထိုနှစ်ချက်သည် လူဖြစ်လာသည့် ဘဝဝယ် မရှိမဖြစ် တန်ဖိုးရှိသည့် လူတန်ဖိုးဖြစ်သောကြောင့်ပင်တည်း။
လူတစ်ယောက် ၊ တန်ဖိုးရှိသည့် လူတစ်ယောက်ကို တိုင်းတာလျှင် မည်သည့်အရာနှင့် တိုင်းတာ၍ ရမည်နည်း။
မှားမှန်ခွဲခြားနိုင်သည့် ပညာမည်မျှ ရှိသနည်း။
စသည့် နှစ်ချက်ဖြစ်သာ တိုင်းတာရပါမည်။ ထို့ကြောင့် ထိုနှစ်ချက်ကို ငါပုဏ္ဏား မလျှော့နိုင်ပါ။ ထိုနှစ်ချက်သည် လူဖြစ်ရသည့်ဘဝဝယ် မရှိမဖြစ် လိုအပ်သည့် လူ့တန်ဖိုးသာ ဖြစ်သည်”
ဟု ဆိုကာ မြတ်စွာဘုရားရှင်ထံ ဦးတိုက်ကာ လျှောက်ထားလိုက်လေသည်။
“အရှင်ဘုရား တပည့်တော် ဆုံးဖြတ်ချက် မှားသလား ၊ မှန်သလား ဖြေကြားပေးတော်မူပါ ။ အကယ်၍များ မှားယွင်းခဲ့သည် ရှိပါက အမှန်ကို ညွှန်၍ သွန်သင်ဆုံးမပေးတော်မူပါဘုရား”
ပုဏ္ဏားကြီးထံမှ ထိုသို့သောမေးခွန်ရောက်လာမည်ကို ကြိုတင်သိလင့်သော မြတ်စွာဘုရားရှင်မှာ
“အသင်ပုဏ္ဏားကြီး၏ ဆုံးဖတ်ချက်သည် ငါဘုရား၏ ဆုံးဖြတ်ချက်နှင့် ထပ်တူညီပါပေသည်။ ထို လူတန်ဖိုး ဆိုသည့် တရားကို ဟောမည်ဟုဆုံးဖြတ်ကာ ထိုသို့သော မေးခွန်းများကို မေးလာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ပုဏ္ဏားကြီးဖြေဆိုသကဲ့သို့ပင် လူတစ်ယောက်၏ တန်ဖိုးကို ကိုယ်ကျင့်သီလနှင့် မှားမှန်ခွဲခြားနိုင်သည့် ပညာဖြစ်သာ တိုင်းတာနိုင်ပါသည်။ ထို ကိုယ်ကျင့်သီလနှင့် မှားမှန်ခွဲခြားနိုင်သည့် ပညာသည် လူတန်းဖိုးသာမက လောက၏ ကျက်သရေမင်္ဂလာပင်ဖြစ်တယ်။ ကျက်သရေမင်္ဂလာရှိလိုသော ပုဂ္ဂိုလ်သည် ထို နှစ်ချက်ကိုသာ စောင့်ထိန်းပါ။ကျက်သရေ မင်္ဂလာနှင့် ပြည့်စုံပါလိမ့်မယ်”
ထိုအကြောင်းအရာသည် မြတ်စွာဘုရားမှ ပုဏ္ဏားကြီးနှင့်ဗြဟ္မာဏအနွယ်ဝင်တို့အား ဟောကြားတော်မူသော တရားတော်မြတ်။
သင်သည် ထိုပုဏ္ဏားကြီးနေရာတွင် ထိုမေးခွန်းမျိုး အမေးခံရလျှင် မည်သို့ ဖြေဆိုပါမည်နည်း။
လူ့သဘော လူ့သဘာဝအရ လူတစ်ယောက်ကိုအမြင်နှင့်ဆုံးဖြတ်တတ်ကြသည်။ ငွေကြေးချမ်းသာမှု ၊ကျော်ကြားမှု ၊ထူးချွန်ကျော်ဇော်မှုတို့သည် လူ့တစ်ယောက်၏ စစ်မှန်သော တန်ဖိုးမဟုတ်ဟု သင် လက်ခံယုံကြည်နိုင်ပါလိမ့်မည်။ တွေးဆနိုင်ပါလိမ့်မည်။
ဒီနေ့ ဒီပို့စ်လေးကို ရေးသားရခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်က တစ်ခါတစ်ရံ လူ့သဘော လူ့မနောတွင် ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထ ရှိသည့် “အတုကြောင့် အစစ်ပျောက်ကွယ်” ဆိုသည့်အတိုင်း တန်ဖိုးအတုအယောင်တွေနောက်ကို ယောင်ရမ်းလိုက်မိရင်း မိမိ၏ နဂိုမူလရှိရင်းစွဲ တန်ဖိုးများကို ချခင်းနင်းမိသည့် အဖြစ်မျိုး သတိမပြုမိပဲ တန်ဖိုး၏ အစစ်အမှန် ကိုယ်ကျင့်သီလ ၊ မှားမှန်ပျောက်ဆုံးကာ စာရိတ္တများပါ ပါသွားတတ်လေသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
မေတို့တွေ ပကာသန အတုအယောင်တွေအောက်မှာ ယစ်မှူးနေကြသည့် စိတ်ကို ရုန်းထွက်ကြရအောင်။
မေတို့တွေ အတုအစစ်ကို ခွဲခြားနိုင်သည့် ဥာဏ်ပညာဖြစ် တန်ဖိုးအစစ်ကို ရှာဖွေကြရအောင်။ လက်တွေ့ ကျင့်ကြံကြရအောင်။
မိမိခန္ဓာကိုယ်ကို မည်သည့် တန်ဖိုးရှိသည့် အရာများဖြစ် ဆင်ယင်လိမ်းချယ်ကြမည်လဲ ၊ မိမိ၏ စိတ်ကို မည်သည့် တန်ဖိုးရှိသည့်အရာများဖြစ် စင်ကြယ်အောင် သန့်စင်မည်လဲဟု သေချာတွေးဆ တန်ဖိုးမြင့်တင်ကြစို့လားရှင်။
/ \_ ♥♥ မေသဇင်
စာပေနှစ်သက်သူများ လွတ်လပ်စွာ ကွဲလွဲပိုင်ခွင့် ရှိပါသည်
လာရောက်လည်ပတ်ကြသူအပေါင်း မေတ္တာရိပ်အောက်တွင် တွေ့ဆုံရ လူ့ဘ၀ တစ်ခဏလေးမှာ ချစ်ချစ်ခင်ခင်နေပြီး လောက ဓမ္မကို ရှာဖွေ ကြရအောင်
“ ဆရာ အံထော်နီ၏ ဟာသစုအုပ်ထဲမှ ”
ကာတွန်းကြိုက်သူများအတွက် (၂၀၁၂) ဦးဘဂျမ်းကာတွန်းပြိုင်ပွဲများမှ ကာတွန်းရုပ်ပုံများကို စုစည်း ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ စကားပြောသော ကာတွန်းရုပ်ြ...
အပျော်လွန်တော့ အပျက်ဖြစ်ခဲ့ပေါ့ တာသင်္ကြန်
မြန်မာဆိုတာ ယဉ်ကျေးတယ်လို့ မျိုးချစ်စိတ် ရှိသူတွေက လက်သီးထောင် ကြိမ်းဝါးကြတယ်။ မြန်မာ့ရိုးရာ အတာသင်္ကြန်ဆိုတာ ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေး သပြေခက်နဲ့ ရေလေ...
ရွှေမြို့တော် လူပျိုသိုးများ အတွက်
မနေ့ညက ရဲရင့်ရထားက ရွှေမြို့တော် အပျိုကြီးများ အိမ်ကို ခဲ(ဂဲ)နဲ့ လာပေါက်ပြီး ခြေကုန်သုတ်ပြေးတယ်။ သာယာလှပတဲ့ အပျိုကြီးများအိမ်ကို ခဲနဲ့ မပေါ...
ခင်ခင်ထူး ရေးသားခဲ့သော စာအုပ်များ ဒေါင်းရန်
ဒီနေရာတွင် ဒေါင်းယူရန် သို့ ဒီမှာလဲ ဒေါင်းနိုင်ပါတယ် လှည်းယှဉ်ကြော့ ကို ဒီနေရာတွင် ဒေါင်းယူပါ သို့ ဒီမှာလဲ ဒေါင်းယူနိုင်ပါတယ် ၀...
အကျီ င်္ပါးနှင့် အပျိုရွယ်
မင်းသမီးတစ်ယောက်ရဲ့ ကြော်ငြာတစ်ခုမှာ ဝတ်ဆင်ထားသည့် အကျီ င်္ပါးကြောင့် စာမရေးဖြစ်တာ ကြာပြီးဖြစ်သည့် မေ့စိတ်ဆန္ဒလေး နိုးထလာခဲ့ပြန်ပါပြီ။ ကြော်ငြ...
သူငှာတွေ အပြိုင်ရေးလို့ မြို့တော်လေးမှာ ချစ်သဝဏ်လွှာတွေထပ် ချစ်သီချင်းတွေ ပြိုင်ဆိုနေကြပြီ။ မသိချင်ယောင်ဆောင်နေတဲ့ မေ့ကို ဟိုကလေးမတွေ လက်...
ရေးနေတာ မပြီးသေးဘူး ခင်ဗျ ဟီးးး ”
အပျို၊အပျိုစစ်နှင့် အပျိုစင် ဆိုတဲ့ ဒီပို့ စ်လေးကို ညီမငယ်လေးတွေ ခွဲခြားသိမြင်အောင်လို့ရေးလိုက်တာပါ...။ မိန်းမဋီကာကြီးကို ကျေညက်လို...
ရေးမလို့ စဉ်းစားတုန်းခင်ဗျ . . .ဟီဟိ”
Blog Archive May (47) June (29) July (13) August (30) September (18) October (9) November (3) December (1) January (11) February (15) March (11) April (13) May (11) June (8) July (5) August (10) September (16) October (23) November (18) December (9) January (8) February (10) March (4) April (2) May (1) June (9) July (7) August (4) September (9) October (4) November (4) December (3) January (1) February (2) April (1)
ဓမ္မ စာမျက်နှာများသို့မြန်မာပြန် တိပိဋကတ်နိဗ္ဗာနပါရမီ ပိဋကတ်တော်နှိဗ္ဗာနဓမ္မE DhammaVRI Dhamma VideoAppamada- အပ္ပမာဒရွှေပါရမီတောရမိုးကုတ်ရိပ်သာ MIMC USAမိုးကုတ်ရိပ်သာ Londonဗမာထေရ၀ါဒ၊ (နော်ဝေး)ဆရာကြီးဦးဘခင် ရိပ်သာစင်္ကာပူ ဘုန်းကြီးကျောင်းBurmese Classicသာသနာရေးဌာနတိပိဋကတ် ကျောက်စာ ဋ္ဌာနမန္တလေး မဟာမြတ်မုနိဘုရားကြီး--သီတဂူ ဗုဒ္ဓ၀ိဟာရလူသားဗုဒ္ဓဓမ္မာနန္ဒ၀ိဟာရ USANibbanaGlobal Pagodaအရိုင်းပန်းမဟာစည်ရိပ်သာ (USA)ချမ်းမြေ့ရိပ်သာDhamma Lecture VCDရွှေဟင်္သာဓမ္မဒါနပရိတ် ပဋ္ဌာန်းတရားတော်တထာဂတ ရိပ်သာသန္တိသစ္စာ, LAဖားအောက်တောရ ရိပ်သာဖားအောက်တောရ ရိပ်သာ USA---ဖားအောက်တောရ ရိပ်သာမေတ္တာနန္ဒ၀ိဟာရမြတ်ရတနာDhamma SukhaPanditarama SydneyPanditarama ManchesterQueensland BurmeseVipassana M, CentreVen. Dr. PannadipaBirmingham BuddhistOxford Buddha ViharaSasana Ransi Vihara, ukTisarana တိသရဏDhamma dipaSae taw win 2Insight Meditationမဒိုင်ကျင်းရွာမှ ကြိုဆိုပါ၏သီရိလင်္ကာရောက် ဆရာတော်များ-Dhamma JournalDhamma OnlineDhammaBuddha netထေရ၀ါဒလူငယ်များBuddhismo Theravada Hispanoတရားတော်ထေရ၀ါဒ ဗုဒ္ဓသာသနာ ပြန်ပွားရေးTriplegem.netသဲအင်းဂူ ရိပ်သာMinistry of Religious Affairsဦးဥတ္တမသာရထားဝယ် ဆရာလေးအနတ္တလက္ခဏာ ၃-ဘာသာ..Dhamma Downloadကမ္ဘာ့ဗုဒ္ဓ တက္ကသိုလ်GBLဗုဒ္ဓဒေသနာဝေါဟာရသုတေသနသရုပ်ပြအဘိဓာန်ယောအသင်းကသစ်ဝိုင်တရားရိပ်သာဓမ္မရံသီလူငယ်ဝတ်အသင်း
ရုပ်သံ တရားဌာနသို့…Sayalay DipankaraGoogle Dhamma Video -ရုပ်သံ-Dhamma Web
စာအုပ်ဆိုဒ်များနည်းပညာစာကြည့်တိုက်ကိုရန်နိုင်ဦးအင်္ဂလိပ်စာလေ့လာရန်မြန်မာ ၀တ္ထူစာအုပ်များတရားတော်များစာအုပ်များမြန်မာ E-LibraryE-books များ
မြန်မာဘလော့ဂ်များကဗျာသီတဲ့ကြိုးကလိုစေးထူးကိုကိုဖရီးကိုရင်ညိန်းကိုရင်နော်၊ ခင်လေးငယ်ကေကေဂျွန်ကေ.တီ.အမ်ကေမောင်ငြိမ်းကေသွယ် (အန်တီ)ကျော်ကျော်ကျော်စွာကျော်ဇေယျကျော်မင်းထွန်းကျော်လင်းထွန်းကျော်လှိုင်ဦးကျော်ဝင်းမိုးကျော်သူလင်းကောင်မလေးကောင်းကင်ကိုကောင်းခန့် (ရသ)ကောင်းမွန်သောမနက်ဖြန်ကြည်မေကောင်းကြယ်စင်ကျော်ကြယ်စင်နတ်သမီးချိုငယ်ဦးချောအိမာန်ခင်မျိုးဝင်းခင်မင်းဇော် (အန်တီ)ခိုင်ဇော်ခိုင်ဘိုဘိုချင်းမလေးချစ်ခြင်းခြေရာချစ်စမ်းချစ်ညီမချစ်သဲချစ်ဦးချစ်အိမ်ငယ်ခွပ်ဒေါင်းနီချမ်းမြေ့ဦးခွန်မြလှိုင်ခွန်မောင်ခပ်ရင့်ရင့် အတွေးသံစဉ်များခွပ်ဒေါင်းဘုံယံသာခွပ်ဒေါင်းမာန်ချယ်ရီပန်းချဲလ်ဆီးနှင့် သူ၏ချစ်သူများဂျိုကာဂျိုးဖြူဂျေဂျက် (မောင်)ဂျင်းဂျက်ကတ်လေးဂျစ်တူးငစနေငွေနှင်းမြူငွေလမင်းငှက်ငယ်လေးငြိမ်းချမ်းအောင်ငြိမ်းငြိမ်းငြိမ်းစုငြိမ်းဇေဦးငြိမ်းဝေငြိမ်းအေးထွန်းငယ်ငယ်ငယ်ဆူးအိမ်စကားဝါမြေစီးဆင်းဆဲပါ ... ဧရာဝတီစိုးဇေယျထွန်းစိုးထက်စိုးမိုးစိုးမင်းစိုးမင်းထိုက်စိုးဝှက်စိုးသီဟစေတန်ဂေါ့စော (ကို)စောမဏ္ဍိုင်စောလင်းနက်စ်စံလင်းထက်စင်ရော်စိုင်းခမ်းထွန်းစိုင်းစိုင်းစိုင်းဝဏ္ဏစစ်နိုင်စစ်မုန်းသူစည်သူစည်သူ (ကျောက်ဆည်)စိတ်ကူးစိတ္တသုခစိတ်ဓါတ်စိတ်မီးအိမ်စိတ်ဝိညာဉ်ကလေးရှိရာစိန်ခလုတ်စိန်မမစပ်မိစပ်ရာစွမ်း (ကို)ဆုငယ် (လိပ်ပြာလေး)ဆုရည်ဆုဝေဆူးလင်းသစ်ဆွိသဉ္ဇာဆိုးသွမ်းဆုံဆည်းရာဆင့်ဆင့်ဆောင်းဆောင်း - In My Worldဆောင်းယွန်းလဇာဂနာဘလော့ဂ်ဇီးကွက် Ulmukaဇေယျာဇော်မိုးအောင်ဇော်မျိုးအောင်ဇင်အေးမိသားစုဇောင်းဇန်ညမီးအိမ်ညလေးညီညီ (သံလွင်)ညီမျှ (ကို)ညီမင်းလူညီလင်းဆက်ညီလင်းသစ်ညိုကြီးညိုချောညောင်ရမ်းဂွတိုဉာဏ်(ကို)စက်မှု၊ နေလွမ်းသူညိမ်းညိုတာရာတာရာဖြူတားတားတီးတူးတူးတို့တစ်တွေရဲ့အစုအဖွဲ့တိုး (ကို)တေဇာတေဇာတေတော့တိုးချန်တော်ကီတက်လူငယ်တင်နွယ်မောင်တင့်ထူးရွှေတောင်ကြီး (သို့) ချယ်ရီမြေတောင်ငူသားတည်ငြိမ်းကိုထိပေ့သျှင်ထားဝယ်သားလေးထူးမြတ်ထူးလမင်းထေရ၀ါဒ ဗုဒ္ဓသာသနာပြန့်ပွားရေးထက်ထက်ခိုင်ထိုက် (ကို)ထွန်းထွန်းလှိုင်ထွန်းမျိုးလှိုင်ထိပ် (ဦး)ဒီရေဒီလူဒီလှိုင်းဒိုးနပ်ဒေါက်တာကားဒိုင်ယာရီဒိုင်း (မောင်)ဒေါင်းမာန်ဟုန်ဒဏ်ခတ်သူဒဏ္ဍာရီညဓမ္မအလင်းရောင်နဒီမိုးညိုနယုန်ထွန်းနေကြီး (ကို)နေချိုအေးနေနေနေနေနိုင်နေဘုန်းလတ်နေမိုးနေမိုးကြယ်နေနတ်နွယ်နေလင်းနေလွမ်းသူ၊ ဉာဏ် (ကို) စက်မှုနေသွေးညိုနေသစ်မှူးနောင်တော်၊ ပိုင်မင်းဆွေနွေဆူးလင်္ကာနွေမုန်တိုင်းနွေနှင်းနွေသူရနျူစွမ်းအင်နိုင်ကိုနိုင်းနိုင်းနိုင်းနိုင်း (အမြဲစိမ်း)နိုင်းနိုင်းစနေနှင်းခါးမိုးနှင်းဆီနီနှင်းဆီနီနီနှင်းနှင်း(သိုးမလေး)နှင်းပွင့်ဖြူလေးနှင်းသဇင်နှင်းယွန်းစစ်နောင်ထွန်းနတ်ပျိုမလေးနန်းခိုင်မေမေဦးနယ်စည်းမခြားနွယ်သာကီပါဂနာပိတောက်မြေပိတောက်ရိပ်ပီကေပီတိပုဂံနတ်ပုထုဇဉ်ပုလဲပုသိမ်ပိုလှတဲ့ မနက်ဖြန်ပိုးသားဖြူပုံရိပ် - စိတ်ကူးပုံရိပ်ပေါ်ပေါ်ပေါက်ကရ ၈၀ပေါက်ကျိုင်းပိုင်မင်းဆွေ၊ နောင်တော်ပြည့်စုံပြည့်ဖြိုးပွတ် (မောင်)ပန်တော်ဦးပန်တော်ဦးသမိုင်းပန်ဒိုရာပန်းခရေပန်းခရမ်းပြာပန်းပွင်းလေးပိဿာငါးဆယ်ဖူးဖူးဖိုးဂျယ်ဖိုးစံဖိုးဇင်ဖိုးတရုတ်ဖိုးထောင်ဖိုးသားဖိုးသူတော်ဖြိုးငယ်ဖြိုးစုဖြိုးသက်အောင်ဖြူစင်မေတ္တာဖြူစင်သူဖြူဖြူသင်းဖောင်တော်ဦးဗမာပြည်သားဗျက္ကဗုဒ္ဓဘာသာ ကကြီးခကွေးဘကောင်းဘလာဂေါက်ဘလင့်ဘ၀သစ်ဘဦး (မောင်)ဘာညာဘားမားကင်းဘားမားဂျီနိုဆိုဒ်ဘားမားဒိုင်ယာလော့ဘားမားရီဗျူးဘိုဘိုမငုံမဒီဂျွန်မနောဖြူမဗေဒါမသက်ဇင်မာယာမဂ္ဂဇင်းမီးလျှံမီးလေးမိုး (မောင်)မိုးကောင်းမိုးကုတ်မီဒီယာမိုးချစ်သူမိုးစက်မိုးညလေးမိုးညိုမိုးပြေးမိုးတိမ်မိုးမြင့်တိမ်မိုးမောင်မိုးမှောင်မိုးရေ (ကို)မိုးလေပြေမိုးလှိုင်ညမိုးဝေမိုးသောက်ယံမုံရွာသတင်းမျှားပြာမျိုး (မောင်)မျိုးမျိုးမျိုးမြင့်အောင်မျိုးဦးဉာဏ်မှူးဒါရီမေမေကိုကိုမေခမေငြိမ်း (အန်တီ)မေငြိမ်းရဲ့ ပညာရေးပို့ချချက်မေဒါဝီမေပျိုမေမိုးမေမိုးမခမော်စီမေအိခင် (လယ်ဝေး)မော်ဒန်ကုသမှော်ဆရာမျက်လုံးမျောက် (၇)ကောင်မိုဃ်းစက်မင်းကျော်မင်းကုန်းသားကြီးမင်းကျန်စစ်မင်းညို၊ မဟာဆန်မင်းတစေမင်းမင်းမင်းမြတ်ဘုန်းမင်းယွန်းသစ်မင်းဝေမင်းသားကြီးမြင့်ဇေမောင်နိုင်မောင်မောင်လှဝင်းမောင်ရင်မြစ်ကောက်မုတ်သုံလေမေတ္တာမြိတ် (ပုလဲမြေ)မာန်လှိုင်းငယ်မြန်မာလူငယ်များမြန်မာ့ပညာရေးမြန်မာ့ရိုးရာ ဗေဒင်နှင့်နက္ခတ်မွန်မွန်းသက်ပန်(ဆေး-၁)မယ်လိုဒီမောင်မယ်လိုဒီမွန်ယမင်းယောဟန်အောင်ယင်းမာပင်ယုန်ကလေးယိမ်းနွဲ့ပါးရတနာစိုးရာမညဖိုးလပြည့်ရဲကျော်အောင်ရဲရင့်ငယ်ရဲဝင့်သူရိုး (မောင်)ရွာသားရွာသားလေးရှာဖွေသူရေခါးရေစင်ရေတမာရွှေဂျမ်းရွှေပုံ့ရွှေပြည်သူရွှေဘိုသားရွှေမင်းသားရွှေမြတ်ရွှေဥသြရွက်မွန်ရင်ခုန်သံများရင်နင့်ပန်းရှင်ရဲထွတ်ရောင်ပြန်ရန်အောင်ရွန်းမီရှမ်းကလေးလဂွန်းအိမ်လမင်းလားရှိုးသူလုလုလူစိမ်းလူတစ်ယောက်လူသစ်လူအေး (မောင်)လှ (မောင်)လျှာရှည်လေနုအေးလေးနွယ်လေးမလောကနတ်လောရှည်လင်းလင်းကိုလင်းလက်လင်းလက်ကြယ်စင်လင်းဦးလွင်ကိုလွင်မိုးလှိုင်စုလွဏ်းဆွေ (ဒေါက်တာ)လျှပ်စစ်လွမ်းစေလွမ်းလုင်လွမ်းသုခ၀ရဇိန်ဝလုံးဝါ၀ါခိုင်မင်းဝိညာဉ်ဝိညာဉ်သစ်ဝိမုတ္တိဝေ (ကို)ဝေဖြိုးဝေလေးဝေလင်းဝင်္ကပါဝင်းဇော်ဝင်းဇော်နိုင်ဝင်းမင်းဆန်းဝိုင်အိုင်တီ ၉၆၀ဏ္ဏ၀ဿန်ဦးသဇင်ဏီသယံဝတီသရဲနီတို့ စံပျော်ရာသာကီနွယ်သားဖြူသားဖြိုးသီဟညိမ်းသုခရိပ်သုည (မောင်)သုနှင်းဆီသူ (ကို)သူရသူရထွန်းသူရိန်သူသူသံစဉ်လှိုင်းသက်နောင် (ကို)သက်ဦးသစ္စာအင်အားစုသဉ္ဇာသန့်ယဉ်ကိုသဒ္ဒါ (အန်တီ)သိမ့်ဟူလားလားဟန်လင်းထွန်းဟန်သစ်ငြိမ်>ဟိန်းအချစ်ကြီးသူအငွေ့အညာသားလေးအဖြူရောင်သက်တံ့အမရာအဖြည့်ခံမလေးအရာရာအရူးလွယ်အိတ်အရှင်ကုမာရအရှင်မေတ္တာစာရအရုပ်ကလေးအလင်္ကာအလင်းတန်းအလွမ်းမျက်ရည်အလွမ်းရောင်အ၀ီစိအာလူးအိတာဥပသကာအိုကိစုအိုးဝေအောင်ဧဏီစိုးအေးမျိုးဝင်းအေးမျိုးဟန်အေးမြတ်မြတ်ကိုအေးလှိုင်အေးအေးချမ်းချမ်းအေးအေးသော်အော်လံမောင်အက္ခရာအောင်ကိုအောင်ကျော်မော်အောင်ကောင်းအောင်ချမ်းလင်းအောင်စရာပြည့်အောင်နိုင်ဝင်းအောင်ဖြိုးအောင်မျိုးမြတ်အောင်မျိုးဟန်အောင်မြေအောင်သာငယ်အောင်ဦးအောင်အောင် (လားရှိုး)အဉ္ဇလီအိပ်မက်အိပ်မက်ရှင်အိပ်မက်အိမ်အိမ်ရှေ့မင်းသားအိမ်လေးအိမ်ဝေးသူအိမ့်ချမ်းမြေ့AlbertAnti Plastic BagsArrbyaiArt of NypianAutoCAD DrawingBest Design WareBiggestBlack DreamBlog DataBlogger HelpdeskBlue PhoenixChaosChironCo2ZenithCrazy DreamloverCypherDay Walker [Soul]DosX86DreamDream AngelE JournalEugene LattFreshupGreen GrilHelenaHoneyI Wanna Be NobodyIceosIT MenJPZJuly DreamKalvin AlexanderKKAwaveKMOKo BoyzKo YeLets Work TogetherLight Of MyanmarLittle Green VillaLkntMayvelousMegumiMephiMis YouMMedWatchmmgamedevMM ThinkerMr BoxMr. GuitarMy Metro WorldN Chan SoeNu-SanO WayOpposite EyePink GoldPrizewaiPrometheusRain MakerRapsterRaven Blood Donor ClubRepublicRuby LandS PotatoSaffron RevolutionSaw GangsterScorpionSee N B SeenServenaSilver MoonSiriusSlipSmallartvilleSmile MaySpreading SoulStanleySynchro 305TeslaTNTTZAWe Unite, We BlogWeSheMeWho are They?World Photography DayXyboYin Ye Monastic SchoolYoung GunZero Trash4 everဂျပ်စမိုင်း (မစံပါယ်)မင်းလှသားလေးကိုဇော်ဒေါင်းမင်းကိုရင်လေးအရှင်ဧသက(မြတ်ပဌာန်း)ခရစ်စတယ်(မဆုရည်)အိန်ဂျယ်လှိုင်(ခင်ဗျားလေး)ကျေးလက်သားလေးတောသူမလေးအလင်းသစ်အင်္ဂါဟူးရဲထွန်းဇော်မိုးယံနိဗ္ဗာန်ဆော်ခင်ဦးမေကိုဇေယျဘလက်ကော်ဖီမြသွေးနီဖြစ်ကျိုးအင်းချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်)နိုင်းနိုင်းစနေBaby tasterRoseကိုကိုမောင်(ပန်းရနံ့)ကိုညီနေမင်းကိုပီတာရဲ့အတွေးပုံရိပ်များကိုရင်ညိန်းကိုဇေယျ(မေတ္တာအေးရိပ်)ကိုဇော်ကိုကြိးကျောက်စန္ဒကူးဆန်နီနေမင်းနန္ဒာနီဟွန်း(လမ်းပြကြယ်)မရွှေစင်ဦးလင်းခေတ်ဒီနိုသက်တန့်ချိသဒ္ဓါလှိုင်းသူရဿဝါအဖြူရောင်နတ်သမီးအဖြူရောင်လမ်းကလေးအဖြူလေးချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်)ငွေစန္ဒာတောက်ပကြယ်စင်နေဇော်လင်းမေသိမ့်သိမ့်ကျော်မောင်မောင်၏ဘလော့ဂ်မောင်နွေသစ်ကြည်ကြည်ရဲ့ဒိုင်ယာရီကြယ်စင်တို့ရဲ့ရင်ခတ်သံမြစ်ကျိုးအင်းမြသွေးနီBlackcaffeeCupitMr MrtRoseကိုထွဋ်ကိုဇေယျ(မေတ္တာအေးရိပ်)ကျွန်မရဲ့ဆိုဒ်လေးတစ်ခုပါပဲကျွန်တော်ဘဝဇတ်ခုံ(မောင်မျိုး)ခင်ဦးမေချမ်းလင်းနေဂငယ်၏လွယ်အိတ်ဆင်တဲကဖေးဇာတိ(ဖျာပုံ) ညယံထိန်လင်းဗွီဒီယိုမှတ်တမ်းနိဗ္ဗာန်ဆော်နှင်းနဲ့မာယာနှင်းအိမ်မက်ပန်ဒိုရာဘသားချောမ မမင်းလှသားလေးမိုးယံမဗေဒါရဲ့ ဗေဒါလမ်းရသဝထ္ထုတိုရွေးချယ်ခြင်းရဲထွန်းဇော်လဂွန်းအိမ်သီချင်းများနားဆင်ရန်သီချင်းအိမ်အင်္ဂါဟူးအလင်္ကာညအလင်းစက်များအလင်းသစ်ဧရာမြေကျော်ညိုသွေးကျေးလက်သားလေးဂျေဂျူဝိုင်စေတနာပန်းခင်းတောသားလေးတောသူမလေးမောင်ဘကြိုင်မောင်လေးအောင်ပိုင်Ah Mei Soe Kyiမြရွက်ဝေ - Mya YwetARLOOArrbyaiarzarniTTSweetawlanmgAthayelayBaby TasterBeautiful MyanmarNyi Min Santaunggyicherrylandမောင်မိုး လBurma Monitorburmasuomicherrymyodawနေဦးသစ်ရဲ့ဒိုင်ယာရီChit Te Ma NawcmsmdyCartonAvocadoချမ်းလင်းနေ တီချမ်း ရဲ့ ကမ္ဘာ coast-fordathanaပြည်သူ့တိုက်ပွဲဒေါင်းဇာနည်My SoulDe Go LarDays of Demon MistydhammathukaDIDDr Lun SweMyanmar Ebooks educationinmyanmara - TECHNOMANIAC'sMy Favorite Place infmm-timesh_cloNe's foToဂျူးလိယက်၏ ၀တ္တုများရွှေရောင်ဆဲလ်များGoldMyanmarနှလုံးသားရပ်ဝန်းမှ အသံများ ဒဏ်ရာပြတိုက်Hot MyanmarHteink Min (ထိုက်မင်း)help-myanmarIDEA MAGAZINEi-filmfestJa MungdanJoy Ful4AllJuly DreamJuneOneKabyar Chit Thuကောင်းကင်ကိုkaykay8282Khin Oo May (ခင်ဦးမေ)KhunMyaHlaingKnowledge VillageMyat Thu HeinK Lo SayKo HtikeKoKyawKo Moe Thee Ko Pawကိုပီတာ၇ဲ.အတွေးပုံ၇ိပ်များKthweကျော်မျိုးသူနည်းပညာ နှင့် E-booksKo Min Htet (PersonalThe images of Koကျွန်တော်.ဘဝ ဇတ်ခုံကြည်အေးLanka-MSMALay Nu AyeLin Let Kyal SinLin Oo's Guitar LessonsLin Oo's Blog ကျောပိုးအိတ်စန္ဒကူးCooking Bookကလူသစ်နဲ့luyogyiလင်းရမ္မာMa Har San (မဟာဆန်)ma ma online diaryMa Nor Hary (မနော်ဟရီ)May More (My Diary)May Nyane (မေငြိမ်:)မီးမီးချစ်Mg Lu AyeBlog of မင်းသူတmmbloggernews mmbloggershelpdeskMMBLOGS.NETmmedwatchMoe Cho ThinMoe Ma Ka (မိုးမခ)ထမင်းအိုးmrdba.mzMue ShariMyanmar News myanmar-chitchat.The New light ofMyanmar BabesMyanmar BlogspotMyanmar Catholic NetMyanmar HunksMarine EngineersMyanmar Music VideoMyat Thuraနေ့အိပ်မက်myhistory191My Home 16 (ကျွန်တော့အိမ်)MyoChitMyanmarMa Baydar (မဗေဒါ)minthuswemmblogpressPersonal BlogMy Kitchen My LifeနားခိုရာNaung ThuNay Chi ZawNay Nay NaingNgaKyawNay Lynn's Personal BlogနွေဦးအိုးဝေNyi Lin ThitNyi Lynn SeckNyi Mu Yarအဝေးရောက်လူငယ်များProgrammer's DiaryNick Nay MannyithitsarPa Dauk Myayအိဖူးပန်းခရမ်းပြာPhoe Thu Taw (သူတော်)Phoo Nu Thit (ဖူးနုသစ်)photomyanmarPhyo Wai Kyawyu wa yiProsper & PeaceFellows Of PYAY GTIPye Aye Photoပညာရေးရွှေရတုမှတ်တမ်းဖိုးတာတီးRed Rose Of BurmaRose of SharonRoyal MyanmarSakura MyanmarSasana MoliSaung Yune Laအဖြူရောင်နတ်သမီးMyanmar Sexy Girlsဒဏ္ဍာရီထဲက ဒိုင်ယာရီအိုPersonal BlogShwe Bo TharSmoke & SpiceSoe HtetSoe Thawn (ဆိုးသွမ်း) မြတ်ဗုဒ္ဓအဆုံးအမများSONATA-CANTATASone Se YarSteve EvergreenS T E VSu Bu Eain (စုဘူးအိမ်)စူးနွယ် ရဲ့ ကမာစုချစ်Swan Brothersလောင်စာစိတ်ချင်းအဖော်Swe Naing Persoal BlogTaungoo (တောင်ငူသား)Aung Naing WinTha Darthargi-scrapbookThe Light Of TruthThet Wai Personal အိပ်မက်များ၏ နိဒါန်းYaung Aungအားလုံးအတွက်My Native Townyintwinphwintsakarယုယမြတ်နိုးဇွန်မိုးစက် (Personal Blog)Zaw Moe AungZin Co Latt
မြန်မာဖိုရမ်များMyanmar Family ForumMyanmar Engineer ForumMyanmar Chatonline ForumMyanmar Native Forummyanmargenius ForumlinyaungForumit4mmForumengineer forum goodmyanmardailymyanmarforum Forumpadonma ForumapytzForummysteryzillion ForummmwordpressForum
ဂျာနယ်များ အလင်္ကာဂီတဂျာနယ်လျပ်တစ်ပြတ်ဂျာနယ်ဈေးကွက်ဂျာနယ်action ဂျာနယ်ပေါ်ပြူလာဂျာနယ်ဖတ်ပါသတင်းဂျာနယ်အခွင့်အလမ်းဂျာနယ်မြန်မာတိုင်းဂျာနယ်ကွန်ပျုတာဂျာနယ်အင်တာနက်ဂျာနယ်Eleven ဂျာနယ်မောက္ခပညာရေးမဂ္ဂဇင်း မာယာ အွန်လိုင်းမဂ္ဂဇင်း စွယ်စုံမီဒီယာ မြန်မာသတင်းရပ်ဝန်း MM DAILY NEWS ရိုးရာလေး7DAY NEWS JOURNAL THE VOICE WEEKLY JOURNAL ပေါ်ပျူလာမြန်မာ MY MC NEWS မြန်မာနိုင်ငံစာပေနှင့်စာနယ်ဇင်းအဖွဲ့ PATHEIN CITY MYANMAR EVENTS ရတနာပုံပေါ်တယ် M TALK လမ်းသစ်ဂျာနယ် တူဒေးမဂ္ဂဇင်းများ မြန်မာပို့စ် လျှက်တပြက်ဂျာနယ် PLANET NEWS ခေတ်လူငယ် ALL CHANNEL ရန်ကုန်တိုင်းဂျာနယ်
စာအုပ်နှင့် မဂ္ဂဇင်းဆိုဒ်များ ရွှေအမြူတွေမဂ္ဂဇင်းသရဖူမဂ္ဂဇင်းတူဒေးမဂ္ဂဇင်းဖွဲ့တည်ရာမဂ္ဂဇင်းပလုတ်တုတ်မဂ္ဂဇင်းPerfect မဂ္ဂဇင်းလောကနတ်စာပေသံလွင်အိမ်မက်လင်းထက်ဖိုရမ်ဝိညာဉ်သစ်Eleven ဂျာနယ်ကြေးမုံသတင်းစာ
- ကျန်းမာရေးနှင့်ဆိုင်သောmyanmarhealthcaremyanmarmedicineHeart InformatoinPublic Heartdrwinthein
သီချင်း ရေဒီယို ဗွီဒီယို MM FLASH SONGS မြန်မာကာရာအိုကေသီချင်းသီဆိုရန်။ မြန်မာတေးသီချင်းစာသားများ။ musicvideo music.all အဖြူရောင်သံစဉ်တေးရုပ်သံဥယျာဉ် MYANMAR SONGS ပလန်းနက် ဂီတသံစဉ် flashbandမဉ္ဇူရီ MP3,MTV စသည်နားစဉ်ဖို့ mp3 သီချင်းများရယူရန်။ ညကဗျာ mp3 နားစဉ်ဖို့၊ဒေါင်းလုပ်ဖို့။ အရိုင်းပန်း MYANMAR IMAGEပန်းစကား လိုတရ mp3 နားစဉ်ရန် MMBLOG(MP3) mp3 နားစဉ်ဖို့ အင်တာနက်ရေဒီယို အိမ်မက်လှိုင်းရေဒီယို JUST MUSIC RADIO အဖြူရောင်သံစဉ်ရေဒီယို မြန်မာယု အင်တာနက်ရေဒီယို ဓမ္မရေဒီယိုနားစဉ်ရန်။ မြန်မာစာတန်းထိုးဇာတ်လမ်းတွဲများ မင်းသီလ မြန်မာဗီဒီယိုဇာတ်ကားများ myanmar international tv အဖြူရောင်သံစဉ်ရုပ်ရှင်ဥယျာဉ် ရွှေဗီဒီယို မေနှင်းအေး မြန်မာဗီဒီယို မြန်မာ့ရုပ်သံများကိုအွန်လိုင်းမှတဆင့် ALL CHANNEL MOVIES ရွှေအိုး FREE MYANMAR VCD MYANMAR WORLD သီးချင်း၊ရုပ်ရှင်၊စာအုပ်၊ myanmar musics,videos
ဆွမ်းဆံ နှင့် ကြွက်ချေးများ ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီ ကချင်သတင်းဌာန ဟစ်တိုင် NLD BURMA NHK BURMESE သျှမ်းသံတော်ဆင့် (ရှမ်း) ကောင်းဝါ (မွန်) ကြေးမုံ နာရဉ္စရာ (ရခိုင်) မိုးမခMIZZIMA BURMA TODAY BBC BURMESE (RFA) ပိတောက်မြေ မြန်မာ MRTV-3 (ဧရာဝတီ)
အနုပညာရှင်များ၏ ကိုယ်ပိုင်ဆိုဒ်များmyanmarcelebrityGolden Sexy GirlMyanmar Models Photo Albumsနဝရတ်ဝိုင်းစုခိုင်သိန်: စိုင်းစိုင်းခမ်:လှိုင်နန်:စုရတီစိုးရတနာခင်တင်မိုးလွင်ဇင်ဇင်ဇော်မြင့်ဇာဂနာActor Phoe ChitYadanar Ponရေဗက္က ဝင်းSu Pan Htwar Ye Lay Mya Yadana Moe NaytoeLwin Moe Htun Aein Dra BoMake-Up Aung AungLuminn, Official WebsiteYar Zar Nay Win Kyi Phyu Shin Zaw Win Htut Zaw ko Ko (Myanmar Director) Htoo Eain ThinOffical Website of Alex Lil Kaung Myat U Lun Gywe Nay Myo Say Myanmar Wdding ZarNyiSeint Okkar Min Maung Lun Mya Mya Actor MaungActor Hein Wai YanActor Wyne Su Khaing Thein Actor Aung Ye Lin Actress Yatanarmy Singer Chan Chan Singer Zaw Paing Actor Nay MinActress Pwint No Girl Band (Myanmar) Singer Sie Thu Lwin Singer Nay Ye Mun Oakka Oo Thar
googleကြီး၏ ၀န်ဆောင်မှုများto visit world famous museums online with googleto customize google talkgoogle photo slide makerto short the url with googleto create the set of itemsmusic discovery projectto discover local recommandations powered by you and your friendsto monitor the latest news story with google alertto let the people decide our ideasto jumb to the google apps from dashboardlean back and watch youtube videosto learn about our body with googleto find the quotes by googleto explore the new or old news storiesto browse news and magazinesauto complete suggestions as you typefree softwares by googlegoogle task managerto search movie showtimes with googlebookmarks with googletour the city with googleto learn about sky with googleto find the quotes by googleto explore the new or old news storieto browse news and magazinesauto complete suggestions as you typefree softwares by googlegoogle task managerto search movie showtimes with googlebookmarks with googletour the city with googleto learn about sky with googleto learn about moon with googleto learn about mars with googlegoogle 3d models collectionto make the own map with googleto collect and display information about ourselvesgoogle social network sitepersonal health record servicesto import and visualize tables onlineto know the stock market quotes, news, currency conversionstranslate the languages by googledictionaries by googlegoogle contacts bookbroadcast yourselfcommunicate and collaborate in real timegoogle online voicemail serviceto checkout the online shopping by googleto search scholorly papers by googleto search webpages by googleto search images by googleto search websites by googleto search the blogs by googleto make the groups on the line by googleto makeawebsite by googleto shop on the line by googleto read international news by googleto get maps from googlewebmasters tools by googleto search e-books by googleblogging by googlegoogle videos servicegoogle photos servicegoogle reader servicegoogle e-mail serviceto make money in blogs and websitesto search the popular things by googlegoogle features3d modelling and drawing by googleto feed blogs and websites by googlegoogle documents servicegoogle notebook servicegoogle calendar serviceto track the friends Via phone internet (or)computer internet by google latitudeanalytics for blogs and websites by googlegoogle customize page
Wordpress Themes များရှာဖွေရန်wordpressmanual wordpressthemesbase freewpthemes wpthemesfree freethemelayouts topwpthemes themelab freewordpressthemes4u blogohblog themetation wpzoom freewebsitethemes web2feel graphicmania freewpthemesite clone24 acosmin free-wordpress-themes wpthemes. ezwpthemes freethemewordpress wpskins wplayout magpress themeboss themes-wp newwpthemes prowordpressthemes wpshower widgetreadythemes forthelose iwordpressthemes templatelite themesplice amazingwordpressthemes themespreview videozone-free-wordpress-theme wpdaddy fresheezy wpthemesdb themes.rock-kitty wpcorner tastythemes wordpresssupplies wordpress2u wpthemes360 mygreencorner themes2wp wordpressthemes2 themesbase ithemes iloveyouwp mkels premiumwp freewpthemes freewpblogthemes themza theme-time gothemes free-wp-themes wpcrunchy freewpthemes productivedreams ericulous newwpthemes wptemplates wp4themes wptheme4free wpfreetemplates greatwordpressthemes siteground paddsolutions dynamicwp simplewpthemes web3mantra tech2connect category/themes wphacks
Android USB Drivers များစုစည်းမှု
Copyright © အလွမ်းခရီးသည် | Powered by Blogger
Blogger Theme by Lasantha - PremiumBloggerTemplates.com | NewBloggerThemes.com